Gen U Ginsenoside Gen Pro - BRAND'S
တစ်နေ့ တာလုံးနိုးကြားနေစေဖို့ 
Ginseng အနှစ်ရည်ပါဝင်ခြင်း ကြောင့် ယာယီမှတ်ဉာဏ် မှတ်ယူနိုင်စွမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း နှင့်စဉ်းစားသိမြင်နိုင်စွမ်းကိုအထောက်အကူပြုသည်
Vitamin B ပါဝင်သောကြောင့် ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ နှင့် အာရုံ့ကြောအဖွဲ့ အစည်းကို ထောက်ပံပေးသည်
BRAND’S® ဂျင်းယူအားဖြည့်ရည်သည် အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့် ယာယီမှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကို ကောင်းမွန်စေသော ဦးနှောက်အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို တိုးမြှင့်ပေးသည်
Scientifically supported active ingredients
ဆေးဝါးထောက်ခံချက်ရရှိထားသော အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် အမေရိကန်နှင့် ကိုးရီးယားဂျင်စင်း သည် အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုကောင်းမွန်စွာ ထောက်ပံပေးသည်
Excellent source of Vitamin Bs
အာရုံကြောအဖွဲ့ အစည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကူညီပေးသေည ပီတာမင် B1, B2, B3, B6 နှင့် B12 များ ပါဝင်သည်
Enhances brain neurons
အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကြောင့် တွေးခေါ်မြန်ဆန် ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စေပါသည်
ဆေးဝါးထောက်ခံချက်ရရှိထားသော အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် အမေရိကန်နှင့် ကိုးရီးယားဂျင်စင်း သည် အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုကောင်းမွန်စွာ ထောက်ပံပေးသည်။ ဓါတုဆေးဝါးနှင့်ဆေးသကြားလုံးဝမပါရှိပါ။
ထမင်းမစားခင် သို့ မဟုတ် ထမင်းစားပြီးနောက် အအေးခံသောက်ပါက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ မသောက်သုံးမှီ ပုလင်းကိုခါပြီးသောက်သုံးပါ။
ဦးနှောက်၏ neuron connectivity ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အပြင် ယာယီမှတ်ဉာဏ် မှတ်ယူနိုင်စွမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း နှင့်စဉ်းစားသိမြင်နိုင်စွမ်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ရောဂါဝေဒနာခံစားရသူဖြစ်ပါကဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှသောက်သုံးသင့်ပါသည်။
ဂျင်းယူမှာပါဝင်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း နှင့် အာဟာရဓါတ်တွေက ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုအထောက်အကူပြုပါသလဲ
A proprietary combination of high quality American Ginseng (Panax Quinquefolius) and Asian Ginseng (Panax Quinquefolius) extracts work together to enhance mental performance. Vitamins B1, B2, B3, B6 and B12 strengthen the core action of Gen U to createabroad range of cognitive benefits. အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ပေါင်းစပ်ဖော်ထုတ်ထားသော အမေရိကန်ဂျင်စင်း (Panax Quinquefolius) နှင့် ကိုးရီးဂျင်စင်း(Panax Quinquefolius) အနှစ်ရည်သည် ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုသွက်လက်မြန်ဆန်စေရန် မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဗီတာမင် B1, B2, B3, B6 နှင့် B12 သည် စဉ်းစားသိမြင်နိုင်စွမ်းကို လှုံ့ ဆော်ပေးသောကြောင့်ဂျင်းယူ၏အနှစ်သာရကိုပိုမိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဂျင်စင်းအရင်းအမြစ်များမှရရှိပါသည်။
Gen U is ideal for individuals aged 15 and above who perform tasks that requireaheavy mental workload. Be itastudent or working professional, it helps them to achieveaclear mind for faster thinking.ျဂျင်းယူသည် အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အထက်များအတွက်သင့်တော်သည်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ငန်းများစွာဆောင်ရွက်ရသူများ ကို ပိုမိုစိတ်ကြည်လင်စေသည်သာမက လျှင်မြန်စွာတွေးခေါ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးမည်။
ဂျင်းယူကိုသဘာဝမှရရှိသော ဂျင်စင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သတ်သတ်လွတ်များအတွက်မှီဝဲနိုင်ပါသည်။
ဂျင်းယူသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် နို့ တိုက်မိခင်များအတွက်သင့်တော်ပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် နို့ တိုက်မိခင်များအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ချက် နှင့် လုပ်အပ်ချက်များရှိသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ တိုင်ပင်ရန်အထူးသင့်လျော်မည်။
အေးပြီးချောက်သွေ့ သောနေရာတွင် သိုလှောင်ထားရန် နှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရုိုက်ထိတွေ့ သောနေရာတွင် မထားသင့်ပါ။ စဝယ်ယူချိန်မှစပြီး ၁၈ လတိုင်တိုင် သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။
ဂျင်းယူကို အအေးခံပြီးသောက်သုံးပါက အကောင်းဆုံးပါ
ဂျင်းယူကို ထိုင်းနိုင်ငံရှိစက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်ပြီး Good Manufacturing Practices (GMP) သတ်မှတ်ချက်အရ အရည်အသွေးမှီစွာထုတ်လုပ်ထားသည်။